Harena ambony sy ankibon'ny tany : Tsy tokony ho raisina toy ny mpanao trafika ireo mitrandraka azy
mardi, 09 février 2021 13:33
Atao inona moa harena ambony sy ambanin'ny tany, ary an-dranomasina io, izay lazaina mila kajiana ho lovain-jafy, raha ilay hiteraka ilay zafy mbola tsy misy aza matin'ny hanohanana sy fahantrana.
Any amin'ny firenena mandroso toa an'i Dubai, dia tsy misy fetra ny fidirana sy fivoahan'ny volamena, ny harena hafa, ny vola vahiny, mila manao fanambaràna fotsiny, dia na 10 taonina aza no entinao miditra ao dia miditra, tsy raisina toy ny trafiquant na olondratsy ireo mpandraharaha.
Ny fepetra dia manao fanambaràna, ka mandoa hetra 1-5% n'ilay volamena na harena nampidirina.
Ireo tany Afrikanina sasany koa dia nanao io fepetra io, ka tafavoaka ihany koa, ny volamena na vokatra ao aminy dia mahazo mivoaka malalaka, fa ny vola vahiny no mila miverina an-tanindrazana ny ampahany betsaka, ka dia maro ireo vola vahiny niditra, ka niakatra ny sandam-bolan'izy ireo, niditra koa ny hetra.
Isika lazaina mpanao afera maloto foana izay mpandraharaha volamena, bois de rose, vatosoa, trondro, crevette, nefa raha natao nalalaka io, dia tsy nisy resabe volamena 73.5kg na 20 tonnes isan-taona izany, fa dia niditra tsara ny hetra sy devise mifanaraka amin'izany.
Tsara ho fantatra fa tsy ny fitehirizana volamena ao anaty coffre n'ny Banky foibe akory, no ampiakatra ny sandam-bola malagasy, fa ny fidiran'ny vola vahiny vidin'ireny harena ireny.
Ny tahirim-bolamena dia ilaina amin'ny resaka antoka fitrosam-bolam-panjakana, na valeur refuge, na antoka rehefa misy krizim-bola.
Mila fehezin'ny Malagasy ny vola Ariary, amin'ny fanafohanana ny MID, fa avela kosa ny sera sy ny fandraharana hiodina sy halalaka, ny fanaraha-maso ny fiverenan'ny vola vahiny no ilaina.
Eto amintsika lasa misitrika ireo mpanam-bola, satria tsy avela anan-karena ny mpandraharaha, fa vao manana dia lazaina fa mpanao trafika, mpangalatra, mpanao kolikoly, fa ireo tena mpanao kolikoly no mahazo tombony amin'ny sakatsakana, satria izy ireo irery no afaka misera, satria eo aminy ny fahefana manao izany.
Mirary soa e.
Ivato : Nibaribary ny fandaniam-potoana
Distrika 60 : Hisitraka indostria 60 mifanaraka amin’ny vokatra sy ny fanjifan’ny mponina eto an-toerana »